Tareenka - Hengyi Electrical Co., Ltd.
Nidaamka korontada jiidista tareenka tareenku wuxuu adeegsadaa unugyo hagaajin si uu u siiyo korontada DC EMUs, sidaa darteed iswaafajinta lama huraan tahay. Marka nuxurka iswaafajiyaa uu dhaafo xaddi go'an, waxay u keeni kartaa waxyeello nidaamka awoodda magaalada. Intaa waxaa dheer, nalalka, UPS, wiishashka ayaa inta badan soo saara 3, 5, 7, 11, 13 iyo iswaafajin kale. Awoodda culeyskuna waa weyn tahay, awoodda falcelinteedu aad bay u weyn tahay.
Harmonics -ku waxay sababaan ilaalinta gudbinta iyo aaladaha otomaatiga ah ee nidaamka korontada inay xumaadaan ama diidaan inay shaqeeyaan, taas oo si toos ah khatar ugu ah hawlgalka nabdoon ee shabakadda korantada; wuxuu keenaa qalab koronto oo kala duwan oo dhaliya khasaare iyo kulayl dheeraad ah, wuxuuna keenaa in matoorku sameeyo gariir farsamo iyo buuq. Aaladda harmonic -ku waxay ku jirtaa shabakadda korantada. sida nooc ka mid ah tamarta, ugu dambayntii waxaa lagu baabbi'in doonaa khadadka iyo qalabka korontada ee kala duwan, taas oo kordhineysa khasaaraha, awoodda falcelinta xad-dhaafka ah iyo is-waafajinta, taasoo dhalisay kororka khasaariyeyaasha korantada iyo wax-ku-oolnimada oo yaraata, waxaana lagu dari doonaa dhinaca danab-sare, taasoo keenaysa -dhibaatooyinka tayada awoodda.
Qalabka nalalka, UPS, taageereyaasha, iyo wiishashka ayaa dhaliya durdurro iswaafajin ah, taasoo dhalisa dhalanrog danab. Isla mar ahaantaana, durdurrada is-waafajinta waxaa lagu dhejin doonaa dhinaca danab-sare iyada oo loo marayo transformer-ka. Ka dib marka shaandhaynta firfircoon (HYAPF) la rakibo, shaandhayntu waxay dhalin doontaa tamar magdhow ah oo leh isla baaxadda laakiin xaglaha wajiga ka soo horjeeda ee iswaafajinta la ogaaday. Shabakadda korantada waxaa lagu dhejiyaa isku -dheelitirnaanta culeyska si loo gaaro ujeeddada shaandhaynta iyo nadiifinta shabakadda korantada, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta heerka fashilka qalabka. Shaandheeyeyaasha awoodda firfircoon waxay leeyihiin waxqabad ka wanaagsan shaandheeyeyaasha aan tooska ahayn ee caadiga ah, waxay si firfircoon u magdhabi karaan iswaafajinta, waxayna u nugul yahiin is -beddelka.
Qorshaha tixraaca sawirka